၀န်ထမ်းအလိုရှိသည်(Web Marketing) - MYSTERY ZILLION
မူလ › Member ဆိုင်ရာ › Job Vacancy ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
kyishaung December 2009 edited January 2010 in Job Vacancy Web Marketing တစ်ယောက်အလိုရှိပါသည်။Website တစ်ခုရှာပေးနိုင်လျှင် 30% ပေးပါမည်။စိတ်၀င်စားသူများဆက်သွယ်ရန်.....PM နဲ့မေးနိုင်ပါသည်းwww.4igloo.comအတက်ပါ ဆိုက်တွင်သွားရောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။4igloo Web Group မှတ်ချက်များ
sai kyaw swar wai December 2009 edited December 2009 Registered Users စိတ်၀င်စားပါတယ်........... ဘာမှတော့ တတ်ဘူးနော်................ kyishaung December 2009 edited December 2009 Registered Users [quote=sai kyaw swar wai;65544]စိတ်၀င်စားပါတယ်........... ဘာမှတော့ တတ်ဘူးနော်................ရတယ် ကိုစိုင်း ဆိုက်အပ်မယ့်သူ ရှာမေးနိုင်ရင်ပဲဖြစ်တယ်. markjacob January 2010 edited January 2010 Registered Users Hi all.I have learned HTML, CSS and Java script.Is there any job related to that ? infofreakz January 2010 edited January 2010 Registered Users joomla web master တစ်ဦးအမြန်အလိုရှိသည် joomla web master တစ်ဦးအမြန်အလိုရှိသည်site setup လုပ်ပေးထားမည်ftp support ပေးမည်DB install လုပ်ထားပေးမည်site အဟောင်း (wordpress) ဖြစ်လုပ်ထားသော data ကို joomla တွင်ပြန်ထည့်ရန်site structure ပြပေးမည်28th Jan မတိုင်ခင်အပြီးလိုချင်သည်US$100 + Bonusကြိုက်ပါက နောက်ပိုင်းအလုပ်ထပ်အပ်မည်Ph : 0809477467[EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL] Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla